Madaxtooyada PL oo amar ku bixisay in la xiro Garowe Online [AKHRI]
GAROWE Jan,20,2015 [GO]- Waraaqdaan oo ku taariikhysan Sept 20,2014 ayaa kasoo baxdey xafiiska warfaafinta madaxweynaha Cabdiweli Cali Gaas waxeyna shirkada Isgaarsiinta Golis amar lagu siinayaa in gabi ahaan hawada Puntland ka saraan warsidaha Garowe Online iyo shabakada kale kuwasoo baahiya wararka maxaliga ah ee degaanadaan.
Qoraalkaan kasoo baxey xafiiska warfaafinta madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas oo soo gaarey warsidaha Garowe online ayaa lagu eedeynayaa in shabakadan ka qayb qaadato Aflagaado loo gaysto madaxda Puntland, iska-horkeenid bulshada degaanka iyo abuuris xasilooni daro taasoo gabi ahaanba aysan ka muuqan sixiixa Wasaarada Warfaafinta Puntland iyo go'aan kasoo baxey maxkamad.
Shirkada Golis ayaa qoraalkaan waxaa si toos ah amar u siinaya shaqsiga ku magacaabin xafiiska warfaafinta madaxweyne Gaas iney si deg-deg ah hawada uga saaraan websiyada ku xusan waraaqdaan kuwasoo uu ugu horeeyo warsidaha Garowe Online.
Dhinaca kale ururka saxafiyiinta Puntland ayaa muddo kala hadlayey xafiiska madaxweyne Cabdiweli Gaas in dib hawada loogu soo celiyo websiyada ay saameynta ku yeelatey qoraalkaan kuwasoo maanta warsaxafdeed ku aadan arintaas soo gaarsiiyey saxaafada Halkan ka akhri
Shabakada Garowe Online oo sanadguuradeedi Tobnaad u dabaaldagtey Feb. 2014 ayaa gabi ahaanba beenineysa eedymahaan ku xusan waraaqdan aan wafaqsaneyn sharciga iyada dadka Somaliyeed iyo beesha caalamka ee nabada jecel u tabisa wararka lagu qoro Afafka Somaliga iyo Ingriiska.
Maamulka sare ee Warsidaha Garowe online/Radio Garowe dhinaca kale ayaa cambaareyn u soo jeedinaya qoralkaan kasoo baxey xafiiska saxaafada madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Cali Gaas kaasoo aan wafaqsaneyn shuruucda saxaafada ee caalamiga ah iyo Dastuurka u yaala dowlada Puntland, waxaana ku baaqaynaa in si deg-deg loo furo websiyada ay saameynta ku yeelatey talabadaan lagu amrey shirkada Golis.
Jarmalka oo lacag ugu deeqay doorashadda Soomaaliya ee 2021 19.10.2019. 06:41
Puntland oo sheegtay in ay ka go'an tahay garab istaaga Jubbaland 19.10.2019. 06:17
Ciidamo loo xiray taliye lagu dilay bar laga ilaaliyo Villa Soomaaliya 18.10.2019. 23:17
Dabley mas'uul dowladeed ku dhex-dishay huteel ku yaala Gaalkacyo 18.10.2019. 21:34
Kenya: Carro ka dhalatay nin dhintay oo xil sarre loo magacaabay 18.10.2019. 16:10
Muwaadiniin Ameerikaan ah oo xabsi loogu taxaabay Shiinaha 18.10.2019. 15:43